जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी
Posted by: युगबोध in विचार May 16, 2018	0 65 Views
डिल्ली बस्नेत ‘संगित’
एकभइ बाचौ ं भने को त अने कतामा जान खो जिदै छ
साम, दाम, दण्ड र भे दले हरे एकलाई खान खो जिदै छ ।
बुझ्नै सकिएन यहा“को वास्तविकताको रहस्य
हे र्दाहे दैर् यो दे शलाई कता लान खो जिदै छ ।।
जे जस्तो रुपमा हामीले यो मुलुकको सपना दे खिरहे का छौ ं त्यो रुपमा दे श अगाडि जान्छ कि जादै न भन्ने चिन्ता आम ने पालीलाई हुनु स्वाभाविक नै हो  । मिले र बसे का आम ने पालीहरु राष्ट्रियताको सवालमा एकढिक्का हुनसक्नु नै वर्तमान कोआवश्यकता हो  । तै पनि, बुझ्नै नसकिने राष्ट्रियताको रागले हामी अन्यौ लको भुमरीमा फस्दै गइरहे का छौ भन्ने आशय मात्र यो पङ्तिकारको हो  । भनिन्छ आशा नै जीवनको सबथो क हो  । आशाले नै जीवनलाई अगाडि डो ¥याउने काम गर्दछ । आशाको दियालो ले नै जीवनलाई अग्रगति दिन्छ । तै पनि, कहिले काहीं निराशाको कालो बादलले छो पिदिदा चारै तिर अध्यारो नै दे खिन्छ । उज्यालो अध्यारो को गर्भमा हुन्छ भन्ने चे तना जाग्यो भने अध्यारो सग लड्ने साहस बटुल्न सकिन्छ । त्यसै ले अ“ध्यारो उज्यालो को शत्रु हो इन, बरु सृष्टिकर्ता पो रहे छ । कि कसो ?
साध सिमानाले जतिसुकै फे रबदल भए पनि गाउ वस्ती, डाडाकाडा, भीरपाखा र पखे राहरु अनि झरना, छा“गा र छहराहरुको संगमस्थल बने को यो दे शको आफ्नै पहिचान छ । चाहे त्यो पूर्वीय भूगो ल हो स, चाहे सुदूरपश्चिमका विकट गाउवस्तीको भूगो ल । चाहे हिमालको हिमश्रृंंखला हो स्, चाहे पहाडका तरे ली अनि तराईको समथर भूगो ल नै किन नहो स् त्यो समग्रमा ने पाल नै हो  । जहा“ म हो इन, हामी बाचे का छौ ं । जहा“ मे रो हो इन हाम्रो भन्ने भावना बा“चे को छ । जहाको धरातलमा ने पाली स्वाभिमान र वीरताको पहिचान मुस्कुराएको छ । त्यो हरे क ने पालीको गर्व हो र अभिमान पनि हो  । हरे क ने पालीको अभिमान भन्नु नै समग्रमा राष्ट्रिय अभिमान हो  । चाहे त्यो पूर्वको मे ची नै किन नहो स् । चाहे त्यो पश्चिमको काली, समग्रमा त्यहा“ ने पाल र ने पालीको आस्था र भरो सा छ ।
हामीलाई हाम्रो दे श बा“चे पुग्छ । हामीलाई हाम्रो दे शको स्वाभिमान सगरमाथा झै उच्च भए पुग्छ । हामीलाई सम्पन्नता हो इन स्वाभिमानपूर्वक बाच्न सक्ने विपन्नता भए पुग्छ । हामीलाई सुख सयल र भो गविलासका साधन हो इन, मिहिने त र कर्मठ पाखुरा बजार्न सक्ने धर्ती भए पुग्छ । हामीलाई कसै को गुलामी गरे र गाडी चढ्नु छै न । हामीलाई कसै को सहाराले स्वार्थको भ¥याङ चढ्नुछै न । हामीलाई मात्र पौ रख र इमानदारितमा विश्वास छ । अनि आफ्नै रगत र पसिनामा विश्वास छ । हामीलाई चौ रासी व्यञ्जन हो इन, आफ्नै घरको ढिडो प्यारो लाग्छ ।
त्यसै ले यी यस्ता घटनाहरुबाट हामी ने पाली सजग र सचे त बन्नुपर्छ । गरिवीलाई परास्त गर्न शिक्षा र सचे तनामा विशे षतः जो ड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार, महंगी र कुशासनलाई रो क्दै पारदर्शी, स्वावलम्बी र सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । यदि हामी यो दे शको भविष्य उज्वल भएको दे ख्न चाहन्छौ ं भने पहिला आफूमा परिपक्व र आत्मनिर्भर बन्नसक्नुपर्छ । गरिवीभित्र आदर्श हो इन व्यावहारिक जीवन चाहिन्छ । नीति र सिद्धान्तको खो क्रो अभ्यासले दे श कहिल्यै अगाडि बढ्दै न । अगाडि बढ्न कार्यान्वयन र परिपक्व अभ्यास चाहिन्छ । त्याग र साधना चाहिन्छ । हामी छौ ं र त यो दुनिया“ छ । दुनिया“ बदल्नु भने कै हामी बदलिनु हो इन र ?
हरे क मान्छे भो लिकै लागि बा“च्न चाहन्छ । जे जति कामहरु गरिरहे छ त्यसको प्रतिफल भो लिले दिने छ । विगतका दिनहरुको परिणाम वर्तमानले दिइरहे को छ । वर्तमानको परिणाम भविष्यले अवश्य नै दिने छ । विगतमा ने पाली जनताले दे खाएको त्याग, तपस्या र वलिदानले वर्तमानको जन्म भएको हो  । विगतलाई एकचो टि फकेर् र हे नेर् हो भने दश बषेर् जनयुद्धको अन्त्यस“गै २०६२÷०६३ सालको आन्दो लन र त्यसले परिलक्षित गरे को लो कतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र ने पाली जनतामाझ आइसके को छ । त्यति मात्र हो इन, मधे श आन्दो लन र त्यसले उब्जाएका थुप्रै प्रश्नहरुलाई सम्बो धन गदैर् ने पालको संविधान २०७२ ले जनतालाई सम्बो धन गरिसके को छ । जनताकै मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुको सर्वसम्मतबाट जगजाहे र भएको ने पालको संविधान २०७२ कै जगमा टे के र मुलुकले प्रतिनिधि सभा, प्रदे शसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि पाइसके को छ ।
संघीयताको मो डलमा मुलुकले पहिलो पाइला टे क्न खो ज्दै छ । संघीयता, समावे शी र सहअस्तित्वकै अवधारणालाई आत्मसात गदैर् विकास निर्माणका खाकाहरु को रिदै छन् । हरे क खाकाहरु को रिदा त्यहा“को वस्तुगत अवस्था र मानवीय भूगो ललाई सम्बो धन गरिनुपर्दछ । त्यहा“को भूगो ल र त्यसै स“ग आश्रित प्राकृतिक सम्पदा, ऐ तिहासिक, धार्मिक, जै विक तथा पर्यावरणलाई जो गाइ राख्न नीतिगतरुपमै जो ड दिन सके त्यसले दिगो विकासमा अहं भूमिका खे ल्न सक्छ । विकास भौ तिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु मात्र हो इन । अपितु, मानवीय पूर्वाधारको निर्माण गदैर् जानु पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो  । विकासले विनाश हो इन विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । तर वर्तमान राजनी तिक जो डघटाउ र त्यसको खिचातानीले गम्भीर समस्याहरु ल्याउने खतरा पनि त्यत्तिकै दे खापरिरहे को छ । एकातिर माओ वादी के न्द्र र एमाले बीचको पार्टी एकीकरणको तिथिमिति लम्बिदै जानु, दुई फरक पार्टीहरुको सै द्धान्तिक पक्षमा विचलन दे खा पर्नु र उनीहरुकै ने तृत्व तहका कार्यकर्ताहरुबीचको व्यवस्थापनमा समस्या आउनुले सत्तापक्षको भिजन मिसन अपारदर्शी दे खिन्छ भने अकोर् तिर मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज गरे र संघीयताको घो डा दौ डाउन खो जियो भने त्यसले भविष्यमा चरम आर्थिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । परिणामस्वरुप, मुलुकमा संघीयता असफल सिद्ध हुन्छ । संघीयता सा“घुरो दृष्टिको णले चल्न सक्दै न । ने पाली जनताले चाहे को संघीयता विके न्द्रिकरणमा आधारित छ । के न्द्रिकृत राज्य प्रणालीबाट सम्बो धन हुन नसके का विकासका जटिलताहरु पmुकाउ“दै वास्तविक जनताको घर आ“गनमा विकासका को शे लीहरु पु¥याउनु नै वास्तविक संघीयताको मर्म र धर्म हो  । त्यो धर्म हामी पालना गर्न सक्छौ ं कि सक्दै नौ ं प्रश्नचिन्ह लागिरहे को छ । थुप्रै चुनौ तीहरु हाम्रा माझ दे खापरिरहे का छन् जो हाम्रो नै तिक मूल्य र मान्यतास“गै समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिस“ग जो डिएर रहे को छ ।
जन्म दिने आमा र जन्मभूमिप्रतिको आस्था र विश्वास जो गाउनु छ भने सदै व श्रद्धा राख्नुपर्छ । श्रद्धा आदर्शले हो इन कर्मले बा“च्छ । कर्मले नै मान्छे लाई महान बनाउ“छ । कर्मले नै दे शबाट गरिवी भगाएर आत्मनिर्भर बन्न सिकाउ“छ । कर्मको यो ञ्जनद्वारा नै यो मुलकले अग्रगति लिन्छ । त्यसै ले भनाइ र गराइलाई एउटै मूलमन्त्रमा बा“ध्दै बो लौ ं– ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी ।’
Previous: सेवानिवृत्त शिक्षकहरु सम्मानित
Next: मोदी भ्रमण र भ्रम
कोरा नारा र आकर्षक भाषणले देशको विकास हुँदैन
घर बहाल कर असुल गर स्थानीय सरकार
क्रान्तिकारीहरुले कहर काटेको गोलघर र माघीको रौनक !!!